पानीले कोरोना भाइरस मार्न सक्छ, के भन्छन वैज्ञानीक ? -पानीले कोरोना भाइरस मार्न सक्छ, के भन्छन वैज्ञानीक ? -
१७ श्रावण २०७७, शनिबार २०:०० मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रकोपको बीचमा, विश्वभरिका वैज्ञानिकहरू यसलाई रोक्न उपायहरू खोज्दैछन्। हात सफाई, सामाजिक दूरी र मास्क कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हातलाई बारम्बार साबुनले धोइन्छ भनिन्छ। यसैबीच, रूसी वैज्ञानिकहरूले कोरोना पानीले पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको दावी गरेका छन। यो अध्ययन भाइरोलोजी र बायोटेक्नोलोजी भेक्टरको राज्य अनुसन्धान केन्द्र द्वारा गरिएको छ।
भाइरस उमालेको पानीले पूर्ण रूपमा नष्ट गर्दछ
यस अध्ययनमा वैज्ञानिकहरूले दाबी गरेका छन् कि पानीले ७२ घण्टा भित्र कोरोनालाई पूर्ण रूपमा हटाउन सक्छ। वैज्ञानिकहरूले दाबी गरे कि भाइरसको ९० प्रतिशत कण २४ घण्टामा र ९९.९ प्रतिशत कणहरू पानीको कोठाको तापक्रममा राखिन्छ। अध्ययन अनुसार, कोरोना भाइरस उम्लेको पानीको तापक्रममा मर्दछ।
जे होस् भाइरस केहि शर्तमा पानीमा बस्न सक्छ, यो समुद्री वा ताजा पानीमा बढ्दैन। यस बाहेक, यो पनि भनिएको छ कि उमालेको पानीले भाइरस पूर्ण रूपमा नष्ट गर्दछ।
कोरोना एक ठाउँमा लामो समय सम्म रहदैन
वैज्ञानिकहरूले दावी गरे कि कोरोना भाइरस स्टेनलेस स्टील, लिनोलियम, गिलास, प्लास्टिक र सिरेमिक सतहमा ४८ घण्टासम्म सक्रिय रहन्छ। उही समयमा, अनुसन्धानले भन्यो कि भाइरस एक ठाउँमा टाँसिएन र प्रायजसो घरेलु कीटाणुशोधकहरू यसलाई हटाउनका लागि प्रभावकारी छन्।
अनुसन्धानका अनुसार इथिल र आइसोप्रोपिल रक्सीको ३० प्रतिशत एकाग्रताले आधा मिनेटमा भाइरसको एक मिलियन कणलाई मार्न सक्छ। यो नयाँ अध्ययनले विगतका दाबीहरूलाई खण्डन गर्छ कि भाइरस हटाउन ६० प्रतिशतभन्दा बढी एकाग्रता मदिरा चाहिन्छ।
उही समयमा, नयाँ अध्ययन अनुसार क्लोरीन पनि सतहको कीटाणुशोधनमा धेरै प्रभावकारी साबित भएको छ र क्लोरीनको कीटाणुशोधन गरेपछि सेर्स कोविड- २ लाई ३० सेकेन्ड भित्र पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिन्छ।